.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Gtalk Registry Deleter
Gtalk Registry Deleter
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ကွန်ပျူတာမှာ တစ်လုံးမှာ ကိုယ်က Gtalk သုံးပြီးပြီဆိုရင် ကိုယ့် Gtalk အကောင့်နာမည် မကျန်ခဲ့အောင်
ဖျက်ဖို့ အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာ သွားပြီး အင်တာနက်သုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆိုရင် ကိုယ်သုံးပြီးတော့ နောက်
လာသုံးတဲ့လူတွေကို ကိုယ့်အကောင့်နာမည် မသိအောင် ခြေရာ လက်ရာဖျောက်ဖို့ အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ MMITD
Myanmar IT Development က Who Am I ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
Download: Gtalk Registry Deleter
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Thurainlin at 21:53
Labels: Computer, Gtalk